सेयर बजार बढेपनि बढेन पुँजीगत लाभकर
सेयर बजार बढेपनि बढेन पुँजीगत लाभकर गत वर्षभर भएको कारोबार पछिल्लो ४५ दिनमै!
नेपाल लाइभ बुधबार, फागुन १४, २०७६, २०:५०
पुँजीगत लाभकर बढ्न सकेन, गत आर्थिक वर्षभरिमा भएको कारोबार पछिल्लो ४५ दिनमै!
काठमाडौं- दोस्रो बजारमा कारोबार रकम बढेअनुसार पुँजीगत लाभकर भने बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको अवधिमा लगानीकर्ताले २४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर सरकारलाई बुझाएका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लगानीकर्ताले ६४ करोड १३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर बुझाएका थिए। उक्त रकम चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा आधाभन्दा कम हो।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा शेयर बजार ११०० को लाइनमा सीमित थियो। तर माघयता शेयर बजार सुधार हुने क्रममा छ। सूचकमा सुधारसँगै कारोबार रकम पनि बढिरहेको छ।
पछिल्लो ४५ दिनमा सेयर बजारमा भएको कारोबार र गत आर्थिक वर्षभरमा भएको कारोबार बराबर छ। माघयता दोस्रो बजारमा एक १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। पछिल्ला एक सातामा हरेक दिन दोस्रो बजारमा अधिकतम कारोबारको रेकर्ड बन्दै आएको छ। यस सातामा मात्रै १४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ।
पछिल्लो ४५ दिनमा भएको कारोबारले भने गत आर्थिक वर्षभन्दा दोब्बरले पुँजीगत लाभकर उठ्ने देखिएको छ। यस अवधिमा सूचकमा सुधार भएको हुँदा नाफामा तिर्नुपर्ने कर बढ्ने छ। करबाहेक ब्रोकरले पनि यसै अवधिमा राम्रो पैसा कमाएका छन्। एउटा ब्रोकर कम्पनीलाई दैनिक एक करोड रुपैयाँ कारोबार भएमा सञ्चालन खर्च पुग्छ। तर पछिल्लो समय एउटै ब्रोकरले ३० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गरेको पाइन्छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा १९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। साथै कुल खर्च भने ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छ।
शेयर बजारमा पछिल्लो तीन वर्षदेखि गिरावट आउदा नेप्सेको आम्दानीमा भारी गिरावट आइरहेको छ। तर केही समयदेखि बढिरहेको बजारले नेप्सेको आम्दानीलाई पनि बढाउने देखिएको छ। साथै सूचक बढ्दा सरकारको पनि पुँजीगत लाभकर पनि बढ्ने छ।
पार्टी एकताका लागि पहिलो पुस्ताले त्याग गर्नुपर्छ : नेता भट्टराई
काभ्रेबाट छुटे ‘विप्लव’ नेकपाका नेता बास्तोला
एनसेलको ‘ह्याप्पी आवर अन रिचार्ज’ अफर बुधबार, फागुन १४, २०७६
दाहाल –नेपाल पक्षले बाेलायाे संसदीय दलको बैठक शुक्रबार, फागुन २१, २०७७
पार्टी एकताका लागि पहिलो पुस्ताले त्याग गर्नुपर्छ : नेता भट्टराई शुक्रबार, फागुन २१, २०७७
काभ्रेबाट छुटे ‘विप्लव’ नेकपाका नेता बास्तोला शुक्रबार, फागुन २१, २०७७
अवैध क्यासिनोमा प्रहरीकाे छापा : २३ लाखसहित १० जना पक्राउ शुक्रबार, फागुन २१, २०७७
टर्कीमा सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना, ११ सैनिकको मृत्यु शुक्रबार, फागुन २१, २०७७
विघटन बदर भएपछि मनमोहन अधिकारीले कसरी ‘फेस’ गरेका थिए संसद्? शुक्रबार, फागुन २१, २०७७